နောကျတနျး ကစားသမားပဲကှာ ဂိုးမပေးအောငျကာကှယျသှားတာဆနျးလား….? ဟုတျကဲ့ ဘိုငျလီ ဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဆနျးပါတယျ…. – Premier League Special
ပှဲပွီးခါနီး နာကငျြအခြိနျပိုမှာ ဗီလာက ခပြေဂိုးရဖို့ တိုကျစဈဆငျကစားခဲ့ပွီး ဖိအားပေးခဲ့ပါတယျ။ အကျစတှနျဗီလာအသငျးဟာ ဘယျတောငျပံကနေ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ဂိုးဧရိယာအတှငျးသို့ ဖွတျတငျဘောပေးပို့ခဲ့ပါတယျ။
အသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဂှိုငျယားနှငျ့ တိုကျစဈမှူးကီနနျဒေးဗီးဈတို့ ခေါငျးခုနျတိုကျပွီး ယှဉျလုခဲ့ကွရာမှာ မကျဂှိုငျယားဆီကလှတျထှကျသှားတဲ့ ဘောလုံးဟာ ဒေးဗီးဈရဲ့ခွထေောကျထဲကို ရောကျရှိသှားခဲ့ပွီး ဒေးဗီးဈက ယူနိုကျတကျရဲ့ ဂိုးပေါကျကို အားပါတဲ့ကနျခကျြနဲ့ လှတျလှတျကြှတျကြှတျ ကနျသှငျးခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အခွအေနကေိုစောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ ဘိုငျလီက အနာခံပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျပဲ ဂိုးသမား ဒီဂီယာရှကေ့နေ ဖွတျဝငျကာ လြှောတိုကျဖွတျထုတျခဲ့ပွီး အကောငျးဆုံးကာကှယျမှုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လဲ ပှဲအပွီးမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးသားတှဟော နောကျခံလူဘိုငျလီကို ဝိုငျးဝနျးပှဖေ့ကျကာ ဂုဏျပွုသှားခဲ့ကွပါတယျ။ အနိုငျဂိုးရှငျ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ၊ ပေါ့ဂျဘာ၊ ဘဈဈကာ၊ ဖရကျဒျတို့ဟာ အိုငျဗရီကို့ဈနောကျခံလူကို ပှဖေ့ကျကာ ဂုဏျပွုခဲ့ကွပွီး ဗီလာကို သရတေဈမှတျခှဲပေးရမယျ့ အခွအေနကေနေ ကယျတငျပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့လုပျရပျကို အသိအမှတျပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီမွငျကှငျးဟာ ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေိုလညျး စိတျကွညျနူးစခေဲ့ပါတယျ။
မကွာခဏ ဒဏျရာပွဿနာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျ နခေဲ့ရတဲ့ ဘိုငျလီဟာ လငျဒီလော့ဖျ ဒဏျရာရရှိလို့နားနရေခြိနျမှာ မကျဂှိုငျးယားနဲ့ အတှဲအဖကျညီညီ ကစားနိုငျခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှကေို ဝုဗျနဲ့ပှဲကတညျးက ပွနျလညျပွသနခေဲ့ပါပွီ။ တှဈတာပျေါမှာလညျး ဘိုငျလီရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ဂုဏျပွုနကွေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျက ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားနပွေီး မှနျကနျတဲ့ လုပျရပျတဈခုလို့ ခြီးကြူးနခေဲ့ကွပါတယျ။
နညျးပွ ဆိုးလျရှား ကလညျး ပှဲပွီး သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ ဘိုငျလီကို ခြီးကြူး သှားခဲ့ပါသေးတယျ။ “သူဟာ ဒဏျရာ အလှယျတကူ ရရှိသှားနိုငျမယျ့ ဖွတျထုတျမှုကို တောငျဂရုမစိုကျခဲ့ဘဲ အသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျပေးသှားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ရုပျပိုငျး ဆိုငျရာ ကွံ့ခိုငျမှုကိုလညျး ခငျဗြားတို့ မွငျတှခေဲ့ ရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ လငျြမွနျမှု နဲ့ ရဲရငျ့မှု တှဟော တဈကယျ့ကို ထုတျဖျောခြီးကြူးထိုကျပါတယျ။ သူက အသငျးမှာ လူခဈြလူခငျ မြားတဲ့ ကစားသမားတဈဦး ဖွဈနတေဲ့ အတှကျ အားလုံးက သူနဲ့ အတူ အောငျပှဲခံခဲ့ ကွတာပါ။
သူဟာ ဒဏျရာတှကွေားမှာ ရုနျးကနျခဲ့ ရတာကို အသငျးသားတှေ အားလုံးသိရှိ ကွပါတယျ။ သူ အခုလို စှမျးဆောငျရညျတှကေို ပွသလာနိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ ကြှနျတျောတို့ အားလုံး ဝမျးသာကွညျနူးခဲ့ရပါတယျ” ဆိုပွီး ပွောကွားသှားခဲ့တာပါ။
ဒီနကေ့စားခဲ့တဲ့ အကျစတှနျဗီလာနဲ့ ပှဲမှာ အဲရဈဘိုငျလီဟာ တိကတြဲ့ပေးပို့မှု ၈၁% ရှိခဲ့ပွီး၊ ဘောလုံးရှငျးထုတျမှု ၆ ကွိမျထိပွုလုပျခဲ့ကာ၊ ဘောလုံးပွနျလညျ ဆယျယူနိုငျမှု – ၇ ကွိမျ၊ သှငျးဂိုးကာကှယျနိုငျမှု – ၁ ကွိမျ ရှိပါတယျ။
နောက်တန်း ကစားသမားပဲကွာ ဂိုးမပေးအောင် ကာကွယ်သွားတာဆန်းလား….? ဟုတ်ကဲ့ ဘိုင်လီ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆန်းပါတယ်….
ပွဲပြီးခါနီး နာကျင်အချိန်ပိုမှာ ဗီလာက ချေပဂိုးရဖို့ တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့ပြီး ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ အက်စတွန်ဗီလာအသင်းဟာ ဘယ်တောင်ပံကနေ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂိုးဧရိယာအတွင်းသို့ ဖြတ်တင်ဘောပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်ယားနှင့် တိုက်စစ်မှူးကီနန်ဒေးဗီးစ်တို့ ခေါင်းခုန်တိုက်ပြီး ယှဉ်လုခဲ့ကြရာမှာ မက်ဂွိုင်ယားဆီကလွတ်ထွက်သွားတဲ့ ဘောလုံးဟာ ဒေးဗီးစ်ရဲ့ခြေထောက်ထဲကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ဒေးဗီးစ်က ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဂိုးပေါက်ကို အားပါတဲ့ကန်ချက်နဲ့ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကန်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဘိုင်လီက အနာခံပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ဂိုးသမား ဒီဂီယာရှေ့ကနေ ဖြတ်ဝင်ကာ လျှောတိုက်ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြတ်ထုတ်မှုဟာ အခန့်မသင့်ရင် ဘိုင်လီ ခြေထောက်ကျိုးသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာတောင်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဂရုမပြုဘဲ အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံးဟာ ဘိုင်လီကို ထိမှန်ပြီး ဂိုးဧရိယာအပြင်ကို ပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ဖြတ်ထုတ်ကာကွယ်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူသာ မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ရင် ယူနိုက်တက်တို့ ဂိုးပေးရဖို့ရှိနေပြီး တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီနဲ့ သရေကျမှာဖြစ်ကာ ယူနိုက်တက်တို့ ကြီးမားတဲ့နစ်နာမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ပွဲအပြီးမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းသားတွေဟာ နောက်ခံလူဘိုင်လီကို ဝိုင်းဝန်းပွေ့ဖက်ကာ ဂုဏ်ပြုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ အနိုင်ဂိုးရှင် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်၊ ပေါ့ဂ်ဘာ၊ ဘစ်စ်ကာ၊ ဖရက်ဒ်တို့ဟာ အိုင်ဗရီကို့စ်နောက်ခံလူကို ပွေ့ဖက်ကာ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပြီး ဗီလာကို သရေတစ်မှတ်ခွဲပေးရမယ့် အခြေအနေကနေ ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမြင်ကွင်းဟာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကိုလည်း စိတ်ကြည်နူးစေခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေခဲ့ရတဲ့ ဘိုင်လီဟာ လင်ဒီလော့ဖ် ဒဏ်ရာရရှိလို့နားနေရချိန်မှာ မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ အတွဲအဖက်ညီညီ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကို ဝုဗ်နဲ့ပွဲကတည်းက ပြန်လည်ပြသနေခဲ့ပါပြီ။ တွစ်တာပေါ်မှာလည်း ဘိုင်လီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဂုဏ်ပြုနေကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်က ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေပြီး မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ ချီးကျူးနေခဲ့ကြပါတယ်။
နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ကလည်း ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဘိုင်လီကို ချီးကျူး သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ “သူဟာ ဒဏ်ရာ အလွယ်တကူ ရရှိသွားနိုင်မယ့် ဖြတ်ထုတ်မှုကို တောင်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘဲ အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ မြင်တွေ့ခဲ့ ရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ လျင်မြန်မှု နဲ့ ရဲရင့်မှု တွေဟာ တစ်ကယ့်ကို ထုတ်ဖော်ချီးကျူးထိုက်ပါတယ်။ သူက အသင်းမှာ လူချစ်လူခင် များတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အားလုံးက သူနဲ့ အတူ အောင်ပွဲခံခဲ့ ကြတာပါ။ သူဟာ ဒဏ်ရာတွေကြားမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ ရတာကို အသင်းသားတွေ အားလုံးသိရှိ ကြပါတယ်။ သူ အခုလို စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပြသလာနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဝမ်းသာကြည်နူးခဲ့ရပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ကစားခဲ့တဲ့ အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ ပွဲမှာ အဲရစ်ဘိုင်လီဟာ တိကျတဲ့ပေးပို့မှု ၈၁% ရှိခဲ့ပြီး၊ ဘောလုံးရှင်းထုတ်မှု ၆ ကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့ကာ၊ ဘောလုံးပြန်လည် ဆယ်ယူနိုင်မှု – ၇ ကြိမ်၊ သွင်းဂိုးကာကွယ်နိုင်မှု – ၁ ကြိမ် ရှိပါတယ်။